Chandelle ~ The Truth About Me | My Burmese Blog
Chandelle ~ The Truth About Me	On November 21, 2011	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Music	ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်တွေ အရမ်းများနေတာနဲ့ ဘလော့ဂ်တောင် ပုံမှန် မရေးဖြစ်တော့ဘူး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီကြားထဲ တောင်ကြီးလဲ သွားလိုက်သေးတယ် မီးပုံပျံပွဲပေါ့ ပုံကတော့ နောက်ရက်မှ တင်တော့မယ်။ အခုကတော့ Dirty Girl ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းပါ။ movie trailer ကြည့်ရင်းနဲ့ ကြိုက်သွားလို့ Shazam app နဲ့ analyze လုပ်ကြည့်တယ် မရဘူး ဒါနဲ့ ကြားလိုက်ရတဲ့ စာသားကို Google မှာ ရိုက်ရှာမှ ရတော့တယ်။ Chandelle ဆိုထားပြီး The Truth About Me လို့ ခေါ်ပါတယ်။
သီချင်းက ဂစ်တာသံက နားထောင်လို့ ကောင်းတယ်… အတက်အကျကလဲ ကျွန်တော့်အကြိုက်မျိုးပဲ အဆိုတော် အသံလဲ ကြိုက်ပါတယ်။ Dirty girl လိုကားရဲ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့လဲ လိုက်ပါတယ်။ ကြိုက်မလားတော့မသိဘူး လောလောဆယ် စာရေးရမှာပျင်းလို့ သီချင်းတင်လိုက်ပါတယ်။ My picture’s in the magazines today
And I should be excited but
I’m really kinda tired of it
I know curious minds
They’re all looking to find some story they can tell
to sell to evening shows tonight
Well they’ve got it wrong
And you’re gonna see, they know my name
But they don’t knowathing about me This is my life and I’m gonna show you
All of the dreams and hopes I hold on too
It’s more than you ever thought you’d see
This is my chance and I’m gonna take it
This is the story, I’m gonna break it now
It’s the truth about me Forget about the rumors that you hear
They fill the page with this and that
But I’ll be sincere
I’m not afraid to let you in
Cause I’matough girl, I’ve got skin
That’s thick enough to let you see
The good and bad, yeah all of me This is my life and I’m gonna show you
It’s the truth about me
This is my life and I’m gonna show you
Nah Nah Nah… Truth about me
Music	One Comment	zaya
ကျနော် တောင်ကြီးမှာတုန်းကတောင် အစ်ကို့ကို သတိရသေးတယ်…
အောင်ပန်းက ပန်းခင်းတွေကိုတွေ့တော့ လဲ အဲဒီတုန်းက ဒီနေရာကို အစ်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူးလားဆိုပြီးတွေးမိသေးတယ်..အရမ်းလှတယ်အစ်ကို..
အခု တောင်ကြီး ကပြန်လာတာဆိုတော့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ..ကျနော်စိတ်ထဲမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကို ပြန်ကြည့်ရတော့မယ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=3+6Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts